Horyaalka ugu fudud iyo kan ugu waxtarka badan leh ee shabakada - Muuqaalka Muuqaalka
Qalabka loo adeegsado shabakadda internetka ayaa loo isticmaalaa si loo ururiyo,. Inta badan makiinadaha raadinta waxay isticmaalaan xogta la xoqay si loo raadsado bogagga shabakadda oo waxay ogaadaan waxa shabakadu hadda ka hadlayso. Isticmaalayaasha aan farsamada ahayn, way adagtahay in la ogaado wiishka webka qalabka ugu fiican. Taa bedelkeeda, cilmi baarayaasha suuqyada iyo shirkadaha falanqeyntu waxay isticmaalaan nadiifinta shabakada internetka si ay u helaan shaqadooda, mana laha dhibaatooyin doorashada qalabka saxda ah.
1. Hubinta Hub:
Dib-u-bixinta Hub waa Firefox-ku-daray oo leh waxyaaba badan oo xog-ururin iyo muuqaalada web-qabsashada - buy 50 twitter followers. Waxay fududeyneysaa raadintaada shabakad waxayna ku keydin kartaa xogta la soo saaray si habboon oo lagu kalsoonaan karo. Outwit Hub wuxuu leeyahay xidhiidh macmiil leh, wuxuuna xakameyn karaa bogga intarnetka oo dhan daqiiqado. Waa mid ka mid ah qalabka ugu fiican ee sahlan ee shabakadda internetka.
2. Soo dejinta. Io:
Waa mid bilaash ah goobta xoqida r oo u oggolaanaya in la qabadsiiyo blogyada ama bogagga qayb ahaan ama gebi ahaanba disugga adag. Qalabkan shabakada ee shabakada ah wuxuu baari doonaa boggaga internetka ee gaarka ah wuxuuna ilaaliyaa tayada xogta la xoqay ka hor inta aanad ku soo qaadin qalabkaaga. Waxaad samayn kartaa goobo kala duwan si aad u rakibto habka aad goobtaaga u soconayso. Soo dejinta. Io kuma jiraan khadadka DOM ama jajab dhiska.
Scraperwiki waa bogga caanka ah ee caanka ah ee ka yimaada kharashka. Waxay bixisaa xogta si fiican loo xoqay isla markaana waxay diyaar u tahay Linux, Windows, Unix iyo Sun Solaris. Isticmaalidda Scraperwiki, si fudud ayaad u soo dejisan kartaa faylasha, sawirrada, iyo fiidiyoowga iyada oo aan loo baahnayn codsiyo. Taageerada Wakiilada waxaa sidoo kale laga heli karaa qalabkan shabakada si uu u xajiyo xawaaraha iyo hubinta aqoonsiga.
Octoparse waa mid aad u awood badan sawir gacmeed . Waxay ku haboon tahay dhammaan noocyada xogta oo had iyo jeer hela natiijooyinka saxda ah. Octoparse waxaa loo isticmaali karaa in lagu dhajiyo bogagga leh awoodooda ballaaran iyo farsamooyinka. Waxay leedahay labo habab oo waaweyn (Mode Advanced iyo Wizard Mode) waxayna ku haboon tahay labada barnaamijka iyo kuwa aan barnaamijka ahayn. Its-point-iyo-guji UI kuu ogolaanayaa in aad macluumaadkaaga ku buuxiso foomka qoraalka, HTML, iyo Excel iyo u soo qaado disk adag ee gudaha gudahood.
Kimono waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican uguna fudud in la isticmaalo shabakadaha shabakada shabaqa. Waxaad u isticmaali kartaa inaad ku dhajiso bogag badan iyo blogs iyo gebi ahaanba bogga galka sawirka adag. Waxaa ugu fiican ee loo yaqaan interface interface-saaxiibtinimo. Marka aad bilowdo Kimono, waxaad awoodi doontaa inaad geliso URL-ka iyo muujiso xogta aad rabto inaad xoqato. Waxay xajin doontaa xogta la xoqay ee keydka macluumaadka u gaar ah si aad u isticmaali karto waqti kasta iyo meel kasta. Kimono wuxuu taageersan yahay in ka badan 13 luuqadood wuxuuna bixiyaa taageerada FTP dadka isticmaala.
Mozenda waa calaamad caan ah oo leh hawlo badan iyo qaababka. Waa waxtar u leh cilmi-baarayaasha xogta, suuq-gareeyayaasha, iyo barnaamijyada. Waxaad ku dhejin kartaa xogtaada macaamiisha Google, Mozenda marnaba kuma tashan tayada. Waa qalab weyn oo loogu talagalay bilowga iyo khabiirada labadaba si sax ah uga shaqeeya shabakada internetka.